Sina Boribory tavoahangy boribory karazana mpanamboatra sy mpanome tanjaka | Yubing
Mahomby be ...
Towers hihena-mikoriana ny tavoahangy boribory
Ny tilikambo fisakafoanana misokatra misokatra dia mpanova hafanana, izay ahafahan'ny rano mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny fifandraisana mivantana amin'ny rivotra.
Ny famindrana hafanana avy amin'ny rano mankany amin'ny rivotra dia tanterahina amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana marimaritra iraisana, fa indrindra amin'ny alàlan'ny famindrana hafanana miafina (famaohana ny ampahan'ny rano mankany amin'ny rivotra), izay ahafahana mahatratra ny mari-pana mangatsiaka ambany noho ny maripana manodidina.
Fitsipika momba ny dingana
Fitsipika momba ny asa:
Ny rano mafana hampangatsiaka dia apetaka amin'ny tampon'ny tilikambo fampangatsiahana misokatra amin'ny alàlan'ny fantsona. Ity rano ity dia mizara sy mizara amin'ny tontolon'ny fifanakalozana hafanana amin'ny alàlan'ny tsindry fizarana rano ambany.
Tsofin'ny mpankafy, ny rivotra madio dia miditra ao amin'ny faritra ambany amin'ny tranokely mitafo mangatsiaka misokatra ary mandositra ny faritra ambony aorian'ny hafanafana sy tototry ny famakivakiana ilay faritra fifanakalozana hafanana lena.
Vokatry ny fihenjanana eto ambonin'ny tany, noho ny haben'ny fifanakalozana, niitatra tamin'ny fomba mitovy ny rano, nianjera tamin'ny haavony iray manontolo. Ampitomboina ny haavon'ny fifanakalozana avy eo.
Ny rano, nangatsiaka noho ny fidiran-drivotra tery, dia latsaka ao anaty loaka mirongatra eo ambanin'ny tilikambo. Avy eo atsoka ny rano amin'ny alàlan'ny saringan. Ny mpanala an-tsokosoko any amin'ny fivoahan'ny rivotra dia mampihena ny fahaverezan'ny fatiantoka.
Ny tilikambo fihenan-tsofina amin'ny tavoahangy tavoahangy dia mampiasa fitaovana famafazana tsindry haingam-pandeha mahomby mba hizara rano mitovy ao anatin'ny tilikambo. Io no tilikambo fanamafisana ny taranaka voalohany mahazatra sy ara-toekarena indrindra hatramin'ny nisian'ny tilikambo fanamafisana. Ny casing Fiberglass Reinforced Polyester (FRP) dia miendrika boribory ka manala ireo fepetra takiana manokana ary tsy voakasiky ny fitarihan'ny rivotra be loatra. Ity maodely ity dia mety amin'ny filàna fampangatsiahana kely, manomboka amin'ny 5 HRT (taonan'ny fandavana hafanana) ka hatramin'ny 1500HRT. Tilikambo hihena ity andiany ity dia mety amin'ny rindranasa HVAC amin'ny ankapobeny sy ny fikirakirana fanodinana isan-karazany.
Fahombiazana avo lenta sy fahombiazana
Maivana & mateza
Safidy ambany ny tabataba azo atao
Previous: Indostrialy Draft Cross-flow Towers ho an'ny famokarana herinaratra, HVAC lehibe ary fotodrafitrasa indostrialy
Manaraka: Towers fanamafisana vita amin'ny volavolan-dalàna miaraka amin'ny fisehoana mahitsizoro
Tilikambo mangatsiaka FRP
tilikambo fihenam-bidy avo lenta
tilikambo fanamafisana indostrialy
tilikambo mangatsiaka misokatra
tilikambo fisorohana karazana malalaka
Tilikambo fihenan'ny tavoahangy boribory
tilikambo mangatsiaka amin'ny rano
Tranobe mitaingina riandrano miampita ho an'ny herinaratra ...
Toeram-pitsangatsanganana mihidy mihodina-mihodina / Ev ...
Towers hihena mihodina-mikoriana mivezivezy / Evap ...
Towers fanamafisana vita amin'ny volavolan-tsokosoko misy mahitsizoro A ...